ဂူတူးစက် – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
ဂူတူးစက် – လှိုင်သာယာ&Hack
Cave Driller သည် idle simulation ဂိမ်းအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။.
အခြား clicker idle ဂိမ်းများနှင့်မတူပါ။, Cave Driller မကြာခဏထိရန်မလိုအပ်ပါ။, ထို့ကြောင့် ယူနစ်များသည် ကလစ်နှိပ်၍ မထိဘဲ အလိုအလျောက် တူးဖော်နေမည်ဖြစ်သည်။, မိုင်းချဲ့ရန် မြေကို တူးပြီး လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်လိမ့်မည်။.
အရေးပါသော မန်နေဂျာများကို အထူးစွမ်းရည်များဖြင့် ခန့်အပ်ပြီး အားကောင်းစေပါ။, ဂိုဒေါင်များ စွန့်ပစ်ခြင်း ကဲ့သို့သော, ပျက်စီးနေသော မိုင်းများကို ပြုပြင်ခြင်း။, သတ္တုတွင်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တူးဖော်နိုင်စေရန် ယူနစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း.
မြေကြီးပေါ်တွင် တူးဖော်ရုံသာမက, အာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့် အခြားဂြိုလ်များတွင် ထူးခြားသောသတ္တုများရရှိရန် မိုင်းတွင်းကို ချဲ့ထွင်တည်ဆောက်ပါ။.
အထူးနှင့်တန်ဖိုးရှိသော 23 မိုင်းတွင်းနက်သည်နှင့်အမျှ သတ္တုအမျိုးအစားများကို ရယူနိုင်သည်။.
ယူနစ်များကို အားကောင်းစေခြင်းဖြင့် သန်းကြွယ်သူဌေးများ၏ အိပ်မက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် မိုင်းတွင်း၏ အကောင်းဆုံးမန်နေဂျာကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါ။, အပိုဝင်ငွေရရန် စက်ပစ္စည်းများနှင့်.
– အထူးလုပ်ဆောင်မှုမရှိဘဲ ပိုင်ရှင်မပါဘဲ မိုင်းတွင်းကို အလိုအလျောက် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ခြင်း။
– Mercury ကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။, သောကြာဂြိုဟ်, အင်္ဂါဂြိုဟ်, ကြာသပတေးဂြိုဟ်, စေတန်, ယူရေးနပ်စ်, နှင့် နက်ပကျွန်း
– စုစုပေါင်း တူးဖော်ခြင်း။ 23 zircon ကဲ့သို့သော သတ္တုအမျိုးအစားများ, မြ, ကိုဘော့, နှင့် iridium
– တာဘိုကဲ့သို့သော တူးကိရိယာမျိုးစုံကို ရနိုင်သည်။, ဟာရီကိန်း, စူပါ, နှင့် Thor
– ဓါးအစရှိတဲ့ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကိရိယာမျိုးစုံကို ရနိုင်ပါတယ်။, ခြေသည်း, အဖျက်သမား
– ဒက်ရှ်ကဲ့သို့သော ဓာတ်လှေကား ကိရိယာမျိုးစုံကို ရရှိနိုင်သည်။, လျှပ်စီးကြောင်း, နှင့် warp
– သံချပ်ကာစသည့် သိုလှောင်ယာဉ် ကိရိယာမျိုးစုံကို ရရှိနိုင်သည်။, ဖေဖေ့ကို, ဂျမ်ဘို
– မိုင်းတွင်းလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ကူညီပေးသော မန်နေဂျာစနစ်
– အမျိုးမျိုးသော စွမ်းရည်များကို အားကောင်းစေရန် အရင်းအမြစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်
– မိုင်းပိတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အံ့အားသင့်စရာ မစ်ရှင်အမျိုးမျိုး, ရတနာသေတ္တာ, ဥက္ကာခဲ, ဓာတ်သတ္တု သွေးကြောရှာဖွေမှု
– အချိန်နှင့်တပြေးညီ buff နှင့် de-buff အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပေးသောသတင်းစနစ်
– ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော မစ်ရှင်များကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
– မီနီဂိမ်းများနှင့် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်းစသည့် အပိုဆုကြေးများစွာကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
– ထောက်ပံ့သည်။ 16 ဘာသာစကားများ
– အောင်မြင်မှုနှင့် ဦးဆောင်သူစာရင်းများကို ပံ့ပိုးထားသည်။
– ပံ့ပိုးထားသော တက်ဘလက် ကိရိယာများ
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Cave, မင်္ဂလာပါ, Driller
← ကယ်လိုရီသွားပါ။ – လှိုင်သာယာ&Hack မတားဘူး။ – တရားဝင်ပါတီဂိမ်း လှည့်စားမှုများ&Hack →
Slash & လိပ်: Live Guild Raids Cheats&Hack
We Are Illuminati: Conspiracy – လှိုင်သာယာ&Hack
Garbage Pail Kids : ဂိမ်းလိမ်များ&Hack
Real Boxing2– လှိုင်သာယာ&Hack
Te Reo Māori/mi/cave-driller-cheatshack/
gagana fa'a Samoa/sm/cave-driller-cheatshack/